Toy ny bokotr’akanjo e… | NewsMada
Toy ny bokotr’akanjo e…
Toa lasa olana saro-bahana, mitarazoka ka miteraka gidragidra lava, tsy vao izao ihany fa efa hatry ny taona maro sy fitondrana nifandimby ity olan’ny tsena sy ny mpivarotra amoron-dalana ity. Ny gaboraraka ! Izay ny anisan’ny antony lehibe nahatonga izany. Zatra ny gaboraraka teto nandritra ny taona maro ny ankamaroan’ny olona, ka samy manao izay saim-pantany, toy ny ganagana milomano. Tsy misy intsony, fa toa zary nofinofy izany hoe fanarahan-dalàna izany. Ny fanarahan-dalàna, izay azo lazaina hoe fepetra takin’ny fampandrosoana.
Mahavariana fa toa izay manao ny mety sy ny tokony ho izy, izay manara-dalàna indray izao no ihomehezan’ny sasany. Any ivelany any anefa, ohatra, na misy fiara na tsy misy fiara mandalo, rehefa maitso ihany ny jiro ho an’ny mpandeha an-tongotra vao afaka miampita. Ary na tsy misy ireny jiro ireny aza, voahaja hatrany ny faritra iampitan’ny mpandeha an-tongotra. Manaja izany koa ny mpamily fiara. Mety ho zava-bitika ihany angaha izany hoy ianao na hoe tsy mahataitra izany, kanefa izany ny mampandroso ny hafa. Matahotra sy manaja ny lalàna tsinona ny olona.
Ary isika mba ahoana ? « Mbola lavitry ny afo ny kitay », hoy ny fitenenana. Amin’ny fomba ahoana ny hanarahan’ny vahoaka ny lalàna raha ny mpitondra sy ny manampahefana, eny, na ny mpanao lalàna… aza, tsy manara-dalàna ? Moa tsy izany tsy fanarahan-dalàna izany koa no mampiteraka olana ka nahatonga ireny krizy nampisavoritaka ny lafiny politika, izay mbola miantraika hatramin’izao ireny ? Toy izany koa ny fandikan-dalàna amin’ny lafiny toekarena (kolikoly, aferafera,…).
Rehefa ny lehibe, ny mpitondra firenena sy izay lazaina hoe manampahefana rehetra ao aminy no tsy manana tahotra ny lalàna velona, resaka fotsiny no betsaka, fihatsarambelatsihy… Aoka tsy hanonofy e ! « Toy ny bokotr’akanjo io », araka ny fitenenana. Rehefa mivaralila ny eny ambony, tsy mandeha amin’ny laoniny ny manaraka rehetra.